I-Punta Cana - Izinto ezibalulekile okufanele uzenze futhi uzibone | Ukuhamba Okuphelele
USusana godoy | | I-Dominican Republic
Akudingekile ukusho, i-Punta Cana ingenye yezindawo ezifunwa kakhulu. Ngoba ngokubalula nje igama layo, siyabona ukuthi amabhishi yilelo pharadesi elifunwa iningi lezivakashi, kodwa kuyiqiniso ukuthi ngaphezu kokujabulela lawo makhona elanga, isihlabathi namanzi aluhlaza, Uhambo oluya e-Punta Cana lusishiya nezinto ezingapheli okufanele sizenze futhi sizibone. Ingabe uzozikhumbula?
Mhlawumbe unombono ujabulele amanye amabhishi athakazelisayo, futhi vele ingenye yezinto ezibalulekile phakathi kwamaholide e-Punta Cana.. Kodwa njengoba ujabulela izinsuku zokuphumula, unezinye izinketho ozozithanda futhi. Uma ungazi ukuthi uzoqala kuphi, ungakhathazeki, sikwenzele umsebenzi. Ngaphambi kokuthi ucime ngokuphelele, khumbula ukukhetha a indiza kanye nehhotela iPunta Cana. Kungani? Ngoba uzohamba nokuvikeleka nokunethezeka kokuba yonke into ivalwe kahle noma iboshwe. Manje yebo, wamukelekile noma wamukelekile eholidini lakho!
1 Hlela uhambo lwakho oluya e-Punta Cana ngephakheji leholide elihlanganisa konke
2 Uhambo lokuqala olunconyiwe: I-Los Haitises National Park
3 Ukuvakashela e-Isla Saona
4 Ukuntywila emanzini e-Catalina Island
5 I-Santo Domingo, ukuvakasha kwamasiko kakhulu
6 Imisebenzi engcono kakhulu ongayenza ePunta Cana
Hlela uhambo lwakho oluya e-Punta Cana ngephakheji leholide elihlanganisa konke
Isinyathelo sokuqala sokukwazi ukuzithokozisa kakhulu kunangaphambili ukuthi ukhethe ukuya eholidini elibandakanya konke e-Punta Cana. Ngoba yilapho kuphela lapho sazi khona ukuthi sinohlelo lwezindawo zokulala oluhlanganisa zonke izinsiza. Ngakho-ke ngale ndlela, kuzodingeka ugxile ekujabuleleni yonke imisebenzi oyithandayo kakhulu futhi uzivumele uhambe ngesivinini esikhululeke kakhudlwana, ngaphandle kokukhathazeka ngokuthi uzodla kuphi noma nini. Yiqiniso, kwezinye izimo Uma sikhuluma ngamahhotela asePunta Cana, kufanele sikhulume ngokunethezeka okukhulu esizokuthola kuwo. Lokhu kusho ukuthi kuzoba nezinsuku lapho ungadingi ukuphuma, ngoba uzothola konke obukufuna.
Impela, lapho sibhukha ihhotela, kufanele futhi sicabange ngenye yezinketho ezifunwa kakhulu ezigxile endizeni kanye nehhotela lasePunta Cana. Umbono ophelele ngoba sizophinda sivale izinyathelo ezimbili ezibaluleke kakhulu ngaphambi kokushiya uhambo. Ngale ndlela, singathola izinhlinzeko ezizohlala zamukelekile.
Uhambo lokuqala olunconyiwe: I-Los Haitises National Park
Sesikubekile kakade ukubhuka kohambo lwethu oluya e-Punta Cana, ngakho-ke uma sesizinzile, i-adventure iyaqala. I-adventure eqala ngenye yezindawo zokuqala ongazivakashela. Lena iNational Park etholakala Bay of Samaná. Uzojabulela indawo ekude nazo zonke izindawo zokungcebeleka ezikule ndawo. Kuyo uzothola lokho okubizwa ngokuthi 'ama-mogote' okuwuhlobo lwezindawo eziphakeme noma izindawo eziphakeme ezakhiwe ngokwemvelo. Ungafika olwandle futhi uthole imigede ehlukene ukuthi indawo efana nale zindlu, egcwele izimfihlo kodwa enhle kakhulu.
Ukuvakashela e-Isla Saona
Ingenye yohambo olufunwa kakhulu futhi isizathu siwukuthi inamabhishi amahle agcwele izihlahla zesundu, kodwa hhayi lokho kuphela, kodwa futhi ahambisana nezixhobo zamakhorali. Kuyinto engenakugwenywa ukuthi amahhotela ase-Punta Cana ahlanganiswe namaphakheji awo anconyiwe kakhulu noma izikhathi zokungcebeleka. Lapho uzothola iMano Juan, okuyindawo ethule kakhulu yokudoba., ezokunqoba, ngenxa yamakhabethe ayo anemibala kanye nokuba yindawo yofudu.
Ukuntywila emanzini e-Catalina Island
Esinye seziqhingi ongazivakashela yilesi. Waqanjwa ngokuthi uCatalina ngoba yileyo ndlela uChristopher Columbus amqamba ngayo ngo-1494. Ngenye yezindawo ezivakashelwa kakhulu futhi kuyo ungathathwa yimisebenzi efana nokutshuza. Kuhlale kuyinto evamile ezindaweni ezinjalo ezidumile. Ngakho-ke, ngemva kokuhambahamba esiqhingini, akukho lutho olufana nokukhetha ukuzivocavoca okuncane. Uzothandana nemibono yayo egcwele imvelo.
I-Santo Domingo, ukuvakasha kwamasiko kakhulu
Uma ngolunye usuku uvuka ekuseni futhi ufuna ukwenza uhambo lwamasiko, akukho okufana nokuya e-Santo Domingo. Ukusuka ePunta Cana cishe amahora amathathu ngemoto. Kodwa kuzofaneleka, futhi okuningi. Njengoba ingelinye lamadolobha amadala kulo lonke elaseCaribbean. Inesikhungo somlando esibiyelwe ngezindonga kanye nezakhiwo ezisukela ngekhulu le-XNUMX. Futhi kule ndawo ungajabulela i-cathedral yokuqala nenqaba ukuthi iMelika yayinayo. Akumangalisi ukuthi iNdawo Yamagugu Omhlaba
Imisebenzi engcono kakhulu ongayenza ePunta Cana
Endaweni ngayinye yolwandle, okuyizinsalela eziningi njengoba sishilo ngaphambili, ngeke uhlale ushisa ilanga noma ugeza. Ngakho ungakwazi ukutshala isikhathi emisebenzini ekhethekile kakhulu. Sishilo ukutshuza kodwa Futhi ungakhohlwa ukuhamba ezindaweni ezinesihlabathi nge-quad noma ukugibela amahhashi. Yini ongayithanda kakhulu? Mhlawumbe ukwazi ukundiza phezu kwendawo noma ukuzijwayeza ukuntweza. Ngaphandle kokungabaza, kukhona ongakhetha kukho ngakunye kokuthandayo. Bheja eholidini lamaphupho futhi ungakhathazeki ngephakethe lakho ngoba indiza ye-Punta Cana indiza kanye nehhotela ingahamba ndawonye, ​​ngephakethe futhi ikugcinele ingcosana enhle. Sizopakisha?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Izinto ezibalulekile ongazenza futhi uzibone ohambweni lwakho lokuya e-Punta Cana